Awoodda al-Shabaab oo aad loo wiiqay bilooyinkii lasoo dhaafay
Hay’adaha Amniga Dowladda Soomaaliya ayaa saddexdii bilood ee la soo dhaafay waxaa si isdabajoog ah gacantooda u soo galayey saraakiil sare oo ka tirsanaa kooxda al-Shabaab.
Hey’adaha ammaanka oo xuuraan badan ka helayey dadweynaha Soomaliyeed iyo hey’adda sirdoonka ayaa ka hortagay qaraxyo, iyagoo sidoo kale howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ku soo qabtay horjoogeyaal ku dhuumaaleysanayey Muqdisho iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobollada dalka. Waxaa jiray kuwa si iskood iskugu soo dhiibay hey’adaha ammaanka.
Horjoogeyaasha iyo hoggaamiyeyaasha isu soo dhiibayaan dowladda Soomaaliyeed ayaa sare u kaceen siiba goballada Bay iyo Gedo iyadoo hogaamiyihii ugu sarreeyay oo isa soo dhiibo uu ahaa Mukhtaar abuu Mansuur Roobow.
Waxaa sidoo kale howgallo ay dhammaan dalka ka fuliyeen Ciidammada Xoogga Dalka lagu laayay boqollaal ka tirsan hoggaamiyeyaasha iyo dagaal-yahannada kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab iyadoo dagaalkii ugu dambeeyay magaalada Qoryooley lagu dilay 10 ka tirsanaa al-Shabaab kaddib markii ururkaas uu ku fashilmay weerar uu ku qaaday saldhig ay Ciidammada Dalka ku leeyihiin magaaladaas.
Al-Shabaab oo ku fashilmeen weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan
Ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab wuxuu dhawaan ku fashilmay weerar uu ku soo qaaday saldhigyo uu Ciidanka Xoogga Dalka ku leeyahay degmooyinka Qoryooley,Awdhegle iyo Bariire kuwaasoo 30 ka mid ahaa argagixisada lagu laayay.
Saraakiil ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in xubnaha al-Shabaab ee weerarkaas soo qaaday intooda badan lagu laayay isla weerarkii ay iyaga soo qaadeen.
Cali Waal oo ka mid ah hoggaanka Ciidanka Booliska ee degmada Qoryooley ayaa sheegay in Ciidammada Xoogga ay degmadaas ku laayeen dagaal-yahannada al-Shabaab kuwaasoo tiradoodu gaareyso 10.
“Dagaal-yahanno ka tirsan al-Shabaab ayaa weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidanka ee degmada Qoryooley, laakiin waxaa inoo suuragalay inaan fashilinno weerarkaas, waxaanan goobtaas ku dilnay 10 ka mid ahaa argaggixisada,” ayuu yiri Cali Waal.
Al-Shabaab oo soo saaray filin qeexayo munaafaqnimada ururka
Ururka diinta ka been sheegay ee al-Shabaab wuxuu dhawaan filin ka soo saaray werarrada uu la beegsado hoteellada. Filinkaas oo lagu magacaabay dila hoggaamiyaasha murtaddiinta, wuxuu ururku ugu talo galay inuu qiil u raadiyo dilka aan kala sooca laheyn ee uu u geysto shacabka aan wax galabsan.
Filinku ayaase saameyn ka dhan ah al-Shabaab yeelani doonaa maxaa yeelay wuxuu tusinayaa dil loo geysanayo dad shacab ah oo qabaan dhar shacab in kastoo munaafaqiinta soo saaray filinkaas ay sheegeen inay dileen askari, wuxuuna muuqaalka si cad u tusinayaa in dadka la dilay ay ahaayeen shacab.
Waxaa sidoo kale filinkaan ururku ku sheegay in waajib diini ah ay saran tahay ururka in ay ridaan ama af-gombiyaan dowladda Soomaaliya iyo in ay bannaan tahay in inta lagu guda jiro af-gombinta loo oggol yahay in ay laayaan dad shacab ah.
Mid ka mid ah xubnaha sare ee al-Shabaab oo lagu magacaabo Suldaan bin Muhammad ayaa “sharraxay” isticmaalka hoteellada iyo in hoteelladaas yihiin saldhigyo milatari si dabeetana qiil uu ugu raadiyo dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay hoteelkii Kismaayo ee dhawaan ururka weerar waxshi ah ku qaaday.
Maaddaama ummadda Soomaaliyeed ay si toos ah u garanayaan in weerarrada ururka al-Shabaab geysto ay ku dhintaan 99% dad shacab ah oo Muslin ah, manaafaqiinta soo saaray filinkaas waxay sheegeen in hoteellada ay ku laayaan keliya dad ay dagaal kula jiraan. Waxaase hubaal ah in ummadda Soomaaliyeed aan been loo sheegi karin oo ay si toos ah aqoon u leeyihiin in ururka dilaaga ah ee al-Shabaab uu weerar la beegsado keliya dad shacab ah oo aan wax galabsan.